गायक सनुप पौडेलको ‘तस्बिर’मा पुजा र आकाश फिचर्ड (हेर्नुहोस् भिडियो) - VOICE OF NEPAL
गायक सनुप पौडेलको ‘तस्बिर’मा पुजा र आकाश फिचर्ड (हेर्नुहोस् भिडियो)
२ जेष्ठ २०७६, बिहीबार ११:१६ 124 ??? ???????
चर्चित गायक सनुप पौडेलको साथमा गायिका निशा कंडेलको स्वरमा रहेको “तस्बिर” बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ ।
केहि दिन अघि मात्र नायक आकाश श्रेष्ठ र नायिका पुजा शर्माको अभिनय रहेको ‘के गर्ने के गर्ने बोलको गीत सार्वजनिक भएको थियो भने दर्शकले निकै रुचाएका छन् । फेरी यस गीतमा पनि आकाश श्रेष्ठ र पुजा शर्मा दोहोरिएका छन् ।
शब्द बिष्णु बाबु देवकोटाको रहेको छ भने संगीत टिका दाहालले भरेका छन् । बुद्ध थापाले छायाँकन गरेको भिडियोलाई बिकास धमलाले सम्पादन गरेका हुन् । राहुल प्रधानले एरेंज गरेको गीतलाई निकेश खड्काले निर्देशन गरेका छन् ।
भिडियो हेर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् :